Ifom yoQhakamshelwano ngeWordPress ene-Spam Protection Version 2.0.0 Ikhutshiwe! | Martech Zone
NgeCawa, Meyi 6, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
EZINTSHA: Ndingacebisa kakhulu Iifom zeGravity ezivela kwiRocketGenius yefomathi yokudityaniswa kwe-WordPress!
Ngamagqabantshintshi angaphezu kwe-140, iFomu yoQhakamshelwano ngeWordPress ngoKhuseleko lwe-Spam, kude kube ngoku, yeyona iplagi idumileyo ndiyincedileyo ukuyiphuhlisa. Ikhutshelwe amashumi amawaka amaxesha kwaye iposti yeyona yam idumileyo kwiwebhusayithi yam. Ndifumene ingxelo eninzi kwiplagi kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze ngayo, ukudibanisa zonke iingcebiso abafundi bam ababenazo!
Nazi ezinye zeempawu:
Isakhono sokwenza uluhlu lokuhla kwesifundo.
Isakhono sokwenza umceli mngeni uphendule imeko ethembekileyo okanye hayi.
Uphuculo olongezelelekileyo lokuthintela iithegi zeskripthi kuvavanyo kwimihlaba edlulisiweyo.
Ukukwazi ukuseta umgca wesifundo esingagqibekanga okanye ukuvumela umsebenzisi ukuba enze into ngokwakhe.
Isitayile esihle esineendawo eziqaqanjisiweyo.
Ukuba unyusela le nguqulo (2.0.0), nceda uqaphele ukuba kuya kufuneka uguqule ikhowudi kwiphepha loQhakamshelwano eliqinisekisa ikhowudi. Kudala isenza ingxelo kwaye ngoku ngumtya oqhelekileyo wokubuyisela.
Yiya kwiphepha leProjekthi ukuze ufumane iinkcukacha ezongezelelweyo kunye nekhonkco lokukhuphela!
Meyi 6, 2007 kwi-8: 29 PM
Umsebenzi omkhulu, ngokuqinisekileyo ndisebenzisa le ndawo yam intsha endiyenzayo ngoku.
Meyi 6, 2007 kwi-9: 15 PM
Enkosi Wes! Kuthathe iinyanga ezimbalwa ukubamba umsebenzi endifuna ukuwenza ngale plugin. Ndiyathemba ukuyenza isebenzise iilwimi ezininzi kwaye yongeze isitayile esongeziweyo kwixa elizayo… ndifuna nje ukukhupha le nto ngoku, nangona kunjalo!
Meyi 6, 2007 kwi-11: 41 PM
Ndisebenzisa iFrames kunye nezinye iifom ze-HTML ngaphambi koku. Kwaye ngoku ndicinga ukuba ndiza kuzama le nkqubo ngoku.
Meyi 7, 2007 kwi-8: 48 AM
Uphuculo oluhle! Ndingaziphucula zonke iifom zam ezikhoyo zeWP ngale. Imigca yezihloko zesiko lulongezo olukhulu.
Ndiza kuyongeza kuluhlu lweplagi kwiWpZipper.
Unokucinga ngokukunika igama elitsha, ukuze abantu bakwazi ukwahlula ngcono kwi-plugin (ii) yeFom yoQhakamshelwano yangaphambili.
Uqhagamshelwano noKarr? (Ndikuchasile ukusetyenziswa ko "K" ophindwe kabini)
Meyi 7, 2007 kwi-9: 59 AM
Ndicinga ukutshintsha igama okwangoku kunokuba ngumbono ombi- ikhutshelwe amashumi amawaka amaxesha kwaye, ngoku, lelona phepha lam lisebenzayo. Kwakhona… igama elithi, "Ifom yoQhakamshelwano ngeWordPress ngoKhuseleko lweSpam", inexabiso elibalulekileyo le-SEO. 🙂
Meyi 7, 2007 kwi-8: 19 PM
Ewe, khange ndicinge ngembali iplagi yakho inayo. Ewe ukutshintsha igama kuvakala njengengcamango embi kwingcamango yesibini.
Meyi 7, 2007 kwi-8: 12 AM
Sawubona uDouglas, andikayisebenzisi le plugin okwangoku, kodwa ndingayisebenzisa kwiibhloko zam kungekudala.
Ngokwenyani bendingazi nokuba uphuhlisa olu hlobo lwezinto, mhlawumbi kufuneka ndiyeke rhoqo.
Kodwa, kwakhona, bendifuna nje ukudlula ecaleni ndithi molo. Kubonakala ngathi inyanga okanye okoko ndingakhange nditsho molo.
Meyi 7, 2007 kwi-8: 20 AM
Wamkelekile kwakhona kwaye ndiyakuthanda ukujonga rhoqo. 🙂
Ungajonga zonke iiprojekthi zophuhliso kwifayile ye- my Iphepha leProjekthi. Ndikwanazo nezinye iiwebhusayithi ezingaphantsi kophuhliso ekufuneka zenze splash entle!
Meyi 7, 2007 kwi-1: 55 PM
UDouglas, loo matye. Enkosi kakhulu ngokwenza iplagi enkulu kangangokuba sele ndiyifumene iluncedo kwindawo endiyenzileyo ndingajonganga nzuzo kwaye ndicinga ukuba ndiza kuyifumana iluncedo kwakhona kwisiza endisenzela umkhwenyana wam .
Meyi 7, 2007 kwi-3: 56 PM
Ubheja, John! Enkosi ngezimvo zobubele. Ukuba ungacinga ngezinye izinto ezongezelelweyo, ungathandabuzi ukundilahla.
Meyi 7, 2007 kwi-1: 15 PM
Umsebenzi omkhulu uDoug. Ndinengxaki yokufumana le nto ukuba isebenze ekuqaleni, kodwa ndifumene ukucima iphepha lam elidala lokudibanisa kwaye ukwenza elitsha lenze iqhinga.
Meyi 7, 2007 kwi-3: 57 PM
Enkosi Dean. Ndinengxaki kwi-WP-Cache ngokuqhubekayo ndiyilungisa ngaphandle kwayo. Ndiyinqumle ukuyicima de ndifumana iphepha apho bendilifuna khona emva koko ndabuya ndalifaka kwakhona.
Meyi 8, 2007 kwi-3: 10 PM
Umsebenzi omkhulu kwakhona Doug! Ifom yoqhakamshelwano ikhangeleka intle kakhulu, ndicwangcisa ukuyongeza kwindawo yam ngokukhawuleza ukuba ndifumane imizuzu embalwa eyongezelelweyo…
Meyi 10, 2007 kwi-7: 43 PM
Uhlala uthabatha ixesha ukubhala into emnandi! Ndiyayixabisa ngokwenene!
Meyi 10, 2007 kwi-8: 02 PM
Akukho ngxaki uDoug-uhlala usenza umsebenzi omkhulu kule bhlog, ke yenza kube lula ukuba nento entle oyithethayo 🙂
Meyi 15, 2007 kwi-8: 55 AM
Kulungile, ndisebenzisa oku kwi indawo yam, kwaye irad. Kanye le bendiyifuna, kunye nokungcono. Enkosi ngokwenza ifom yoqhakamshelwano lweWordPress egqibeleleyo !!
Meyi 15, 2007 kwi-9: 12 AM
Ubheja, uShawn! Olunye ulwenziwo oluzayo! Isakhono sokongeza imibuzo kunye nokwenza ngokwezifiso ubeko kunye nezimbo!
Meyi 17, 2007 kwi-11: 01 AM
Inye into endifuna ukuyazi: uzenza njani ukuba izimvo zakho zisebenze ngoluhlobo? Ndingathanda ukubanakho ukukhetha ukuphendula kumagqabantshintshi, njl. Njl. Kubukeka kumnandi.
Meyi 17, 2007 kwi-11: 16 AM
UShawn, yiyo impendulo yezigidi zeedola! Ndabhala abantu abalungileyo eAkismet ndaza ndabuza ukuba bangathanda ukusebenzisana nam ukwenza oku ngezimvo kwaye khange bavakale ngathi bayayithanda.
Nangona kunjalo, i-WordPress 2.2 inamandla okwenza amagqabantshintshi ukuze iplagin yenziwe. Ndiza kwenza ukumba ndibone!
Meyi 18, 2007 kwi-4: 06 AM
UDouglas, wazi njani ukuba usuku lwam lokuzalwa luza kuza?!?
Oku kuhle kakhulu! Eyona iplagi ingcono! Kwaye kanye xa ndicinga ukuba ayinakulunga! 🙂
Meyi 18, 2007 kwi-6: 13 AM
Usuku lokuzalwa olumnandi, Joni! Ndiyavuya ukuyiva. Kuninzi okuzayo! Qiniseka ukuba jonga ezinye iiprojekthi zam!
Juni 4, 2007 ngo-9: 50 PM
Ndongeze ukukhutshwa okutsha ngokuhlwanje ngebhokisi yokukhangela onokuyenza ukuze uzikhuphele kwisingeniso.
UDean @ Sachi
Juni 7, 2007 ngo-1: 49 PM
Hee Doug- Ngokuqinisekileyo sekulixesha. Ndibaleke ndangena kule plugin ngelixa ndikhangela. Umsebenzi omkhulu kuyo.
Umbuzo: ulongeza njani uluhlu lokwehla njengoko utshilo? ngaba kufuneka singene kwiphepha lethu loqhakamshelwano kwaye songeze '(Ukhetho A | Ukhetho B | njl. Kubonakala ngathi ayisebenzi kum. Ngokucacileyo, ndilahlekelwe yinto.
Juni 7, 2007 ngo-2: 05 PM
Elo liphawu lokukhutshwa kwamva nje, uDean. Ukuba unomdla wokugqibela-ewe, unokongeza nje izifundo zakho kwaye ubaphelise usebenzisa iPipe.
kunokwenzeka ukuba 'ukhulule' le iplagi ukuze ifundwe ngokulula ngolu hlobo:
'I-imeyile yakho: [ibhokisi yokufaka itekisi] [ngenisa iqhosha]' ?????
ilula kakhulu. kwaye umsebenzisi ubeka i-imeyile yakhe kuloo bhokisi, kwaye ithunyelwa kwenye ye-imeyile, ukuze umsebenzisi ajoyine uluhlu lwee-imeyile (esizifaka ngesandla).
Ngaba oku kude lee kwindlela yokusebenzisa iplagi yeWP ukwenza umsebenzi olula?
Kwakhona, emva kokuba umntu ebethe iqhosha 'lokungenisa' kweliphi iphepha abathathiweyo? okanye ingqinisisa ukungeniswa?
Vuyisana noncedo lwakho!
Ndicinga ukuba uthathe icala lasekhohlo ndaweni ithile… ayisiyo iplagi yokubhalisela i-imeyile, likhonkco lephepha lokudibana. Ndingathanda isixhobo sokubhalisela i-imeyile, ndingacebisa iFeedburner.
I-MT Herald Dot Com
Jul 24, 2007 ngo-1: 36 AM
I-Thanx ye-plugin enkulu. Yeyona yokugqibela. Ungayibona isebenza nakwindawo yam. Ukunciphisa umthwalo omninzi wogaxekile.
Sep 4, 2007 kwi-9: 50 AM
Molo, bendikhangela ifom yezimvo kwindawo esekwe kubathengi ngegama. Bangathanda ukuba neefom ezimbini zamaqela amabini ahlukeneyo asebenzise indawo.
Ngaba oku kunokwenzeka nge-plugin yakho?
Sep 8, 2007 kwi-8: 04 AM
Ukuhlaziywa ku-2.0.7 namhlanje. Le nguqulo isebenzisa i-wp_mail - utshintsho olukhulu enkosi ICallum Macdonald. Kuni nonke bantu ebeninengxaki ngemeyile esebenza nomphathi wakho-oku kufanele ukwenza ubuqhetseba!
Oktobha 7, 2007 ngo-1: 38 PM
Ndingathanda ukusebenzisa iifom ezimbini kwiwebhusayithi enye, ngaba oku kunokwenzeka?